आफ्नै अनुहारमा समस्या आएपछि छाला विशेषज्ञ बनेकी संगीता :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
आफ्नै अनुहारमा समस्या आएपछि छाला विशेषज्ञ बनेकी संगीता
छाला विशेषज्ञ संगीता पुरी। तस्बिरः प्रभाकर गौतम/सेतोपाटी
ऐना छ र त मान्छे शताब्दीऔंदेखि आफ्नो अनुहार हेरेर मनैमन मस्किन पाएको छ। सुर्खेतबाट प्लस-टुको पढाइ सकेर काठमाडौं आउनुअघि संगीत पुरी पनि ऐनामा आफ्नै रूप हेरेर मख्ख पर्थिन्। तर जसै काठमाडौं आइन् उनलाई एलर्जीले सताउन थाल्यो।
उनका दिदी र साथीहरू मेकअप गरेर सिँगारिन्थे। अरू सिँगारिएको देख्दा उनलाई पनि 'राम्री' बन्न मन लाग्थ्यो। सुन्दर देखिने रहरमा जब उनी कुनै क्रिम लगाउँथिन्, एलर्जी थप बढ्थ्यो। अनुहार सुन्निन्थ्यो पनि।
यस्तो समस्याबाट पार पाउन उनले डाक्टर र विशेषज्ञको सल्लाह-सुझाव लिइन्। थरीथरीका क्रिम र औषधि लगाइन्। ब्युटीपार्लर धाइन्। एलर्जी कम हुनुको साटो बढिरह्यो।
'दिन, हप्ता गर्दै महिनौं बित्दै जाँदा छाला विशेषज्ञहरूले पानीले मुख नधुनू भन्नेसम्मको सुझाव दिन थाले,' संगीताले भनिन्, 'तपाईंको छाला एकदमै संवेदनशील छ, निको हुन धेरै वर्ष लाग्छ भन्थे।'
धेरै विशेषज्ञले यसोभन्दा उनी अब कहिल्यै बिसेक नहुने भयो भनेर आत्तिन्थिन्।
जहाँ, जति धाए पनि कुनै फाइदा नभएपछि उनी आफ्नै अनुहारसँग झस्किन थालिन्। ऐना हेरेर आफैंसँग धेरैपटक रिसाइन्। कयौंपटक एकान्त खोजेर सुँकसुँकाइन्।
संगीताका लागि आफ्नो संवेदनशील छाला जीवनकै संवेदनशील समस्या बनिदियो। उनी मानसिक रूपमै निराश भइन्। कुनै बेला यसरी छालाको समस्याले प्रताडित भएर कहिल्यै निको नहुने सोचमा पुगिसकेकी संगीता अहिले छाला रोग विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छिन्। उनलाई सफा र चम्किलो अनुहार देख्दा उनले छालासम्बन्धी समस्या भोगेकी थिइन् भनेर पत्याउन मुस्किल पर्छ।
ललितपुर कुमारीपाटीमा 'डिकस्मो क्लिनिक' सञ्चालन गरिरहेकी उनले त्यहीँ विगतको कथा सुनाउँदै भनिन्, 'मेरो आफ्नै भोगाइले मलाई छाला रोग विशेषज्ञ बनायो।'
संगीताका साथीहरू पालैपालो अमेरिका गइरहेको समय थियो। उनको सपना पनि स्नातक सकाएर अमेरिका पुग्ने थियो।
'तर एलर्जीले यति सतायो कि म आफैं आफ्नो उपचार गर्ने निर्णयमा पुगेँ। छालासम्बन्धी अध्ययन गर्न अमेरिकाको साटो फिलिपिन्सको एस्थेटिक्स युनिभर्सिटी गएँ,' उनले भनिन्।
फिलिपिन्समा तीन वर्ष अध्ययन गर्ने बेला पहिलो प्राथमिकता आफ्नै उपचार विधि पत्ता लाउनु थियो। उनी छालाको विकासमा हुने विभिन्न प्रक्रिया र पाटाबारे अध्ययन गर्न थालिन्। संगीताका अनुसार पढ्न थालेपछि उनले आफ्नो छाला र समस्याको प्रकृति आदिबारे जानकारी पाइन्।
'समस्याको कारण र उपचार विधि ठम्याएपछि एक वर्ष निरन्तर अनुशासित भई स्याहार गरेँ,' उनले भनिन्, 'काठमाडौं फर्केपछि आफ्नो छाला सुहाउने क्रिम प्रयोग गर्न थालेँ। के गर्न हुने र नहुने भन्नेबारे सचेत भएर स्याहार गर्दा समस्या समाधान भयो।'
आफ्नो समस्या समाधान गर्दैगर्दा उनी छालासम्बन्धी अरूको समस्या हल गर्ने ज्ञान पनि बढाइरहेकी थिइन्। फिलिपिन्समा अध्ययन गर्ने उनका साथीले पढाइ सकेर आफ्नै क्लिनिक सञ्चालन गरेको पनि देखिन्।
'साथीहरूको काम देखेर मैले पनि नेपालमा आफ्नै क्लिनिक सञ्चालन किन नखोल्ने भन्ने लाग्यो। आफूले सिकेको कुराले अरूलाई पनि फाइदा हुने भएकाले क्लिनिक सुरू गरेँ,' उनले भनिन्।
डिकस्मो अमेरिकी ब्रान्ड हो जसको आधिकारिक शाखा नेपालमा संगीताले खोलेकी हुन्। उनका अनुसार डिकस्मोका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमध्ये उनी एक सेयर होल्डर हुन्। सन् २०१६ देखि डिकस्मोमा सक्रिय संगीता आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त छाला विशेषज्ञ भन्छिन्। उनका अनुसार छालासम्बन्धी रोगलाई आन्तरिक र बाह्य समस्याका रूपमा बाँडेर बुझ्दा सजिलो हुन्छ।
छालासम्बन्धी समस्याका कारण अरू गम्भीर रोगजस्तो मान्छेको मृत्यु नभए पनि मानसिक रूपमा असर पार्ने भएकाले गम्भीर रूपमै लिनुपर्ने उनको मत छ।
'छाला हामीले जीवनभर धारण गर्ने कुरा भएकाले धेरै महत्वपूर्ण छ। छाला नराम्रो भए आत्मविश्वास कम हुनुका साथै मानसिक निराशाको सिकारसमेत भइन्छ,' उनी भन्छिन्, 'यसलाई अरू रोगजस्तै सोचेर उपचार गर्न जरूरी छ। देखासिकीमा नपरी भरपर्दो सल्लाह लिएर उपचार गराउनुपर्छ।'
डिकस्मोमा छालासम्बन्धी आन्तरिक र बाह्य दुबै खाले समस्याको उपचार गरिन्छ। संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सेवामा जोड दिन उनी दैनिक दसदेखि पन्ध्र जना बिरामीलाई समय दिने बताउँछिन्। यहाँ बिबिरा, डन्डिफोर, चायापोतोको उपचारसँगै दाग हटाउने, चमक बढाउने, बिग्रेको छाला विशेष विधिबाट खुर्किने लगायत सेवा पाइन्छ। त्यस्तै यहाँ निःशुल्क सल्लाह र स्किन स्क्यानर सेवा उपलब्ध छ।
'बिरामीलाई हामी खाने औषधि दिँदैनौं। औषधि खाएर निश्चित समयका लागि समस्या कम भए पनि फेरि बल्झिने सम्भावना धेरै हुन्छ। पछिसम्म छालामा समस्या नआओस् भनेर रोगको प्रकृतिअनुसार उपचार विधि अपनाउँछौं,' उनले भनिन्।
सुरूमा महिलाका लागि मात्र सेवा दिने डिकस्मोमा अचेल पुरुषहरू पनि सल्लाह र उपचारका लागि आउँछन्। उनका अनुसार सबभन्दा धेरै चायापोतो सम्बन्धी समस्याले सताएकाहरू यहाँ पुग्छन्। पहिला तीस वर्ष कटेकामा यो समस्या धेरै देखिन्थ्यो। अचेल कम उमेरकामा पनि देखिन थालेको छ।
अधिकांश छालासम्बन्धी समस्याको कारण पत्ता लगाउन गाह्रो हुने पनि उनी बताउँछिन्। समस्या पहिचान गरेर फरक मान्छेलाई फरक खालको उपचार विधि अपनाउनु उनको काम हो।
सबैले मौसमअनुसार छालाको स्याहार गर्नुपर्छ। अहिले जाडोमा छाला सुख्खा हुने वा फुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
छाला विशेषज्ञ संगीताको सुझाव छ, 'जाडोमा चिसो लाग्छ भनेर हामी धेरै समय घाममा बस्छौं। तर छालासम्बन्धी झन्डै सबैजसो समस्या घामकै किरणले देखिने हो। त्यसैले दिनको तीन-चार पटकसम्म घामबाट जोगाउने सन-प्रोटेक्सन क्रिम र मोस्चराइजर लगाएर मात्र घाममा बस्नुपर्छ।'
सातै दिन बिहान दस बजे खुल्ने क्लिनिकमा उनी हरेक दिन बिहान १२ बजेभित्र पुगिसक्छिन्। बेलुकी ७ बजेसम्म यहीँ हुन्छिन्।
काममा रमाएर व्यस्त हुने उनी आफ्ना लागि पनि समय छुट्याउँछिन्, दैनिक करिब दुई घन्टा। हरेक बिहान मोबाइल बन्द गरेर योग गर्छिन्। मनमा कुरा नखेलोस् भनेर सुत्ने बेला संगीत सुन्छिन्। नियमित व्यायाम गर्ने, पत्रु (जंक) खानेकुरा नखाने र अनुशासित जीवन बाँच्ने बानी बसाल्न सके त्यसले अन्य रोगजस्तै छालासम्बन्धी समस्या कम गर्न पनि सघाउने उनको भनाइ छ।
संगीताको अनुशासन र आनीबानीको असर उनको मुहारमा झल्किन्छ। हँसिलो र उज्यालो अनुहारकी उनलाई नयाँ मान्छे भेट्न रमाइलो लाग्छ। नयाँ ठाउँ घुम्न, नयाँ साथी बनाउन र नयाँ कुरा सिक्न पनि।
उनी आफू बिरामीसँग साथीसरह व्यवहार गर्ने बताउँछिन्।
उनका साथी बन्नेमा कलाकारसमेत छन्। केही चर्चित मान्छेमार्फत् समेत प्रचारप्रसार भइरहेको डिकस्मो अझै नयाँ छ भन्दा फरक पर्दैन। संगीताका अनुसार सुरूको समय बजार, सेवाग्राहीको मनोविज्ञान र आधारभूत संरचना बनाउने काममा बित्यो। बल्ल उपचार गराएका बिरामीमार्फत् प्रचारप्रसार हुन थालेको छ।
ज्ञान र आत्मविश्वासका साथ नेपाल फर्के पनि सुर्खेतकी संगीताका लागि काठमाडौंमा क्लिनिक चलाउने काम सजिलो थिएन। उनका आमाबुबा संगीता विदेश नगए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे। त्यस बेला आफ्नी हजुरआमाबाट भने पूर्ण समर्थन पाएको उनी सम्झिन्छिन्।
घरका मानिसलाई प्रमाणित गर्नेजस्तै छालासम्बन्धी आममानिसको बुझाइ पनि चुनौती बनेको थियो।
'धेरै मान्छेमा छालालाई केमिकलले खाइदिन्छ भन्ने बुझाइ छ। यदि हानीकारक छैन भने केमिकलले छाला बिगार्दैन भनेर बुझाउन सुरूका दिनमा बढी मेहनत गर्नुपर्‍यो। त्यो बेला अलि निरूत्साहित पनि भएकी थिएँ। तर पुरानो हुँदै जाँदा मान्छेका समस्या बुझ्न र आफ्नो काम बुझाउन पहिलाजस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन।'
अहिले संगीताको चम्किलो र सफा अनुहार देखेर यहाँ आउने कतिपय सेवाग्राही भन्छन्, 'तपाईंको छाला कति राम्रो! तपाईंलाई त कुनै समस्या छैन होला है!'
जवाफमा उनी हाँस्दै भन्छिन्, 'अहिले ठीक छु तर कुनै बेला एकदमै ठूलो समस्या भोग्नुपरेको थियो। मलाई आफू निको हुन्छु भन्ने लागेकै थिएन। मेरोजस्तै सही उपचार भएपछि तपाईंको समस्या पनि समाधान हुनेछ। नआत्तिनुस् ल।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ३०, २०७८, १७:३१:००